လုံခြုံရေး တရားဥပဒေ နိုင်ငံရေး 850 views
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ တိုးတက်မှု (စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး) တို့၏ အဓိကမဏ္ဍိုင်မှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပင် ဖြစ်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်သူ၊ ဥပဒေပြုသူ၊ တရားစီရင်သူများအနေနှင့် မိမိတို့တွင် ရှိပြီးဖြစ်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပြဋ္ဌာန်းပြီး ဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြရပါသည်။ နိုင်ငံအား အုပ်ချုပ်သူဟုလည်းကောင်း၊ ဥပဒေပြုသူဟု လည်းကောင်း၊ တရားစီရင်သူဟူ၍ လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံအား ကာကွယ်သူဟူ၍ လည်းကောင်း ထိုဆောင်ရွက်နေသည့် ဆောင်ရွက်ချက်များအား ဥပဒေမှပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထူးအခွင့်အရေးမယူရပါ။ မိမိတို့ဆောင်ရွက်မှုသည် မိမိတို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့် ဘောင်အတွင်းကသာ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ မိမိတို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ထက်ပို၍ လုပ်ဆောင်ခွင့်မရှိပါ (Excess of Power)၊ မိမိလုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်များအား ပျက်ကွက်၍မရပါ (Failture to PerformaDuty)၊ မိမိအာဏာအား အလွဲသုံး၍မရပါ (Abuse of Power)၊ ထိုထက်ပို၍ သတိထားရမည့်အချက်မှာ သဘာဝတရားမျှတမှု ဥပဒေ၏မူကို ချိုးဖောက်၍မရပါ (Breach of the principle of natural Justice)။ အထက်ပါ ဥပဒေမူသဘောအတိုင်း ဆောင်ရွက်မှသာ ဥပဒေစိုးမိုးမှု ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မှာ နိုင်ငံတော်၏ အဓိကအရေးကြီးသည့် ကဏ္ဍများတွင် တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်နေရသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ အလွန်အရေးကြီးလှပါသည်။
အလားတူပင် ထိုနိုင်ငံအတွင်းရှိ နေထိုင်ကြကုန်သော နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ၏ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်နှင့် ပတ်သက်သော စားဝတ်နေရေးအား လုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရမည်မှာ အစိုးရတွင် တာဝန်ရှိသကဲ့သို့ နိုင်ငံသားတိုင်းကလည်း မိမိတို့နေထိုင်သည့် နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက် နိုင်ငံတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေနှင့်အညီလိုက်နာရန် တာဝန်ရှိမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များ ပူးတွဲလျက်ရှိနေသည်ကို နိုင်ငံသားတိုင်းက သိရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ အခွင့်အရေးကိုသာ တောင်းဆိုပြီး တာဝန်ကိုမလိုက်နာပါက မိမိထမ်းဆောင်ရမည့် တာဝန်ပျက်ကွက်မှုအပေါ် မိမိက ထိုက်သင့်သည့် ဆိုးကျိုးကိုသာ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ တည်ဆဲပြဋ္ဌာန်း ဥပဒေများနှင့်အညီ လိုက်နာနေထိုင်ရန်လိုအပ်ပြီး ထိုတည်ဆဲဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ပါက ဥပဒေအရ ပြစ်ဒဏ်ခံရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးဟု အကြောင်းပြပြီး အခြားသူများ၏ အခွင့်အရေးအား ထိခိုက်၍မရနိုင်ပါ။ နိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူများက နိုင်ငံအပေါ်တွင် သစ္စာစောင့်သိရန် လိုအပ်ပြီး နိုင်ငံအကျပ်အတည်း ဖြစ်နေချိန်တွင် နိုင်ငံအားဆူပူစေရန် တမင်ကြံရွယ်ပြုလုပ်မှုမှာ အလွန့်အလွန်ဆိုးသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် အထူးတင်ပြလိုသည့်အချက်မှာ ယခင်သမ္မတကြီး အဂ္ဂမဟာသရေစည်သူ သတိုးသီရိသုဓမ္မဒေါက်တာ ဦးဘဦးက ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပသည့် ၁၉၅၅-၅၆ ခုနှစ် တရားသူကြီးများ ညီလာခံတွင် မြွက်ကြားသည့် မိန့်ခွန်းများအား အောက်ပါအတိုင်း ကောက်နုတ်တင်ပြလိုက်ပါသည်။
“Let the end be legitimate, let it be within the scope of the Constitution and all means which are appropriate, which are plainly adopted to that end, which are not prohibited to the National Government, but consist with the letter and spirit of the Constitution, are constitutional;”
“ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်သည် လမ်းမှန်ပေစေ။ အခြေခံဥပဒေအတွင်းလည်း ကျပေစေ။ ဤကဲ့သို့ဖြစ်ပါမူ ဘာမဆို လုပ်နိုင်သည်။ လုပ်ပါက ဥပဒေအတိုင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆရမည်။
၎င်းမူအကြောင်းကို Dr.Harold Zink ရေးသားထားသည့် “Government and Politics in the United States” ဆိုသည့် စာအုပ်၌ ကြည့်မည်ဆိုပါက တွေ့နိုင်ပေသည်။ ဤမူသည် အင်္ဂလိပ်တိုင်းပြည်၊ အိန္ဒိယတိုင်းပြည်ရှိ ရုံးများ၌ လိုက်နာဆောင်ရွက်သော မူဖြစ်ပေသည်။ ဤမူကို ခွဲခြား၍ အသေးစိတ် ကြည့်လိုက်မည်ဆိုသော် အောက်ပါမူသုံးချက်ကို တွေ့ရပေလိမ့်မည်။
1. “Every interest, including the freedom ofaperson, must be subordinated to the safety and security of the state.”
“ကိုယ်ကျိုးထက် တိုင်းပြည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ပိုမို အရေးပေးရမည်”
2. “Where the interpretation of the Constitution or an Act ofacountry is open to two interpretations, the interpretation that is most beneficial to the state must be adopted.”
“အခြေခံဥပဒေဖြစ်စေ၊ အက်ဥပဒေဖြစ်စေ အဓိပ္ပာယ်ပြန်ရာ၌ စကားနှစ်ခွ ပြန်နိုင်ခဲ့သော်၊ တိုင်းပြည်၏အကျိုး၊ လူထု၏အကျိုးရှိမည့် အဓိပ္ပာယ်ကို ယူဆရမည်”
3. “Justice must not only be does but must be done promptly.”
“အမှုဆုံးဖြတ်သည့်နေရာမှာ တရားသဖြင့် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆုံးဖြတ်ရမည်”
ဤမူတွေသည် ဘယ်လိုဆိုလိုသည်ဟု ဥပမာပြရမည်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်ထောင်စုကြီးသည် အခြားနိုင်ငံတစ်ခုနှင့် စစ်ဖြစ်သည်ဆိုပါတော့၊ ထိုနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားအချို့တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၌ ထိုစဉ်အခါက နေထိုင်ကြ၍ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြည်ထောင်စု၏ အတွင်းကနေ၍ ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ်ပြုလုပ်မည်ဟု အစိုးရအဖွဲ့က လုံလောက်သော ထောက်ထားချက်များအရ ယူဆပါက ထိုသူများကိုဖမ်းဆီး၍ စစ်ပြီးသည့်တိုင်အောင် ချုပ်နှောင်၍ထားနိုင်သည်။ ထိုနည်းအတူ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ၊ ပြည်တွင်း၌ ဆူပူသောင်းကျန်းမှုများဖြစ်ပါက တိုင်းပြည်ကို ဒုက္ခပေးမည့်လူများအား အစိုးရကဖမ်းဆီး၍ ချုပ်နှောင်ထားနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့ ချုပ်နှောင်ထားပါက မည်သူမည်ဝါကမှ အစိုးရအဖွဲ့ယူဆထားသော ယူဆချက်များသည် လုံလောက်သည်၊ မလုံလောက်သည်ဟု ပြောဆိုရန် အခွင့်အရေးမရှိ။ ဤကဲ့သို့ အစိုးရအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အမေရိကန် တရားဝန်ကြီးချုပ် John Marshal ချမှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းအတိုင်းဖြစ်ပေသည်။ ဤတွင်မက အင်္ဂလိပ်တိုင်းပြည်၌ Defence of the Realm Act အရ၊ စီရင်ထားသော စီရင်ထုံးများကို ကြည့်ပါကလည်း ဤမူကိုလိုက်နာသည်ကို တွေ့ရပေလိမ့်မည်။ ဤမူသည် အလွန်မှပင် မွန်မြတ်သောမူဖြစ်ပေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ပြည်ထောင်စုကြီး လုံခြုံမှ လူအများလုံခြုံမည်။ ပြည်ထောင်စုကြီးသာယာမှ လူအများသာယာမည်ဟု မြွက်ကြားခဲ့ပါသည်။
ယခုအချိန်တွင် မိမိတို့နိုင်ငံအား အဘက်ဘက်မှ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ဖြင့် မလိုသူများက သိက္ခာကျစေရန် လည်းကောင်း၊ မတည်ငြိမ်စေရန် လည်းကောင်း ပြုလုပ်နေသည်ဖြစ်ရာ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၊ ပညာရေးတိုးတက်မှုမှာလည်း သင်သလောက် ခရီးမရောက်နိုင်သည့် အနေအထားသို့ ရောက်နိုင်သဖြင့် နိုင်ငံအား နှောင့်ယှက်နေသူများကို ဥပဒေနှင့်အညီ တိကျစွာ အရေးယူထိန်းသိမ်းမှသာ နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
အလားတူ လုယက်မှု၊ လူသတ်မှု၊ ခိုးမှု စသည့် ပြစ်မှုပေါင်းများစွာမှာ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပြီး နိုင်ငံမတည်ငြိမ်စေရန် နိုင်ငံရေးဗန်းပြ၍ လုပ်ဆောင်နေသူများလည်းရှိရာ ထိုသို့ ရာဇဝတ်မှုများအား ဗြောင်ကျကျ ကျူးလွန်သကဲ့သို့ နိုင်ငံရေးအား ဗန်းပြလုပ်ဆောင်နေသူများကလည်း နိုင်ငံမတည်ငြိမ်စေရန် လုပ်ဆောင်နေမှုမျိုးကို နေ့စဉ်လိုလို ကြားသိနေရပါသည်။
ဤနေရာတွင် အထူးတင်ပြလိုသည်မှာ ယခင်က လူတစ်ဦးအနေနှင့် ထောင်ကျရန်မဆိုထားဘိ၊ အချုပ်ခံရသည်ပင်လျှင် ကြောက်လန့်နေရသည့် အခြေအနေမျိုးရှိခဲ့ပါလျက် ယခု လူသတ်၊ လုယက်၊ နိုင်ငံရေးဗန်းပြ လုပ်ဆောင်နေသူများ၏ နှုတ်မှ မိမိတို့အား ထောင်ထဲသို့ပို့ရန်၊ ဖမ်းဆီးရန် ပြောကြားမှုများ ရှိသကဲ့သို့ ထိုသို့ပြောကြားမှုများမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခံရသူများအဖို့ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသည်ကိုပင် နာမည်ကြီးစေရန်၊ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင် ဖြစ်စေရန်လမ်းကြောင်းဟု ယူဆနေဟန်ရှိသကဲ့သို့၊ ထို ဖမ်းဆီးခဲ့ရသည့် အချုပ်၊ ထောင်သို့သွားလျှင်ပင် ပျော်ပွဲစားနေရာသို့ ရောက်ရှိမည်လောဟူသော အချက်တို့မှာ ပေါ်လွင်လျက်ရှိပါသည်။
သို့ဖြစ်ရာ လူသတ်မှုဖြင့်လည်းကောင်း၊ လုယက်မှု၊ ခိုးမှု စသည့် အမှုများအား ကျူးလွန်နေသူများမှာ ထောင်ထဲနေရသည်မှာ အပြင်ဘက်တွင်နေရသည်ထက် သာလွန်ကောင်းမွန်နေပါသလားဟူသော အချက်မှာ စဉ်းစားဖွယ်ရာဖြစ်နေပါသည်။ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူများအား ၎င်းတို့၏ အကျင့်စာရိတ္တပြုပြင်မှုကို ဦးစားပေးသည်ဟု ဆိုသော်ငြားလည်း ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ် မျှတရန်လိုသကဲ့သို့၊ အလားတူပြစ်မှုများ မကျူးလွန်နိုင်စေရန် နောင်ကြဉ်လောက်သည့် ပြစ်ဒဏ်မျိုးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ မသမာသောနည်းလမ်းများစွာဖြင့် နိုင်ငံ၏တည်ငြိမ်ရေးကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးသူများ၊ နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးစေရန် အားပေးအားမြှောက် ပြုမူပြောဆိုနေမှုများအား ဥပဒေနှင့်အညီ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှသာ နိုင်ငံအေးချမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါသည်။